BRN ၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ - မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက် (BRN)
စိတ်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနိုင်သည့် အလှတရားများနှင့် ဇီဝမျိုးကွဲ စုံလင်ပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကချင်ဌာနေ တိုင်းရင်းသားဘိုးဘေးတို့၏ ဌာနစံပျော်ရာ ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှိ ငေါ့်ချမ်းခလွင်ပြင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတို့မှ စီမံချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အကြီးစား ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ရေ ကာတာလေးခု၏ ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်တွင် ရောက်ရှိနေပါသည်။
အဆိုပါ ရေကာတာစီမံကိန်းများကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စွမ်းအင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (International Coorperation and Development Corporation – YEIG)အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီး လျှပ်စစ် ဓာတ်အားမီဂါဝပ် ၁၂၀ဝ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဧရာဝတီမြစ်၏ အဓိက မြစ်လက်တက် တစ်ခု
ဖြစ်သော မေခမြစ်၏ လက်တက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ငေါ့်ချမ်းခမြစ်ကို ပိတ်ဆို့ရန် စီစဉ်နေကြသည်။ ငေါ့်ချမ်းခမြစ်ကို အခြေတည်ကာ ဖြစ်ပေါ်သော ငေါ့်ချမ်းခလွင်ပြင်သည် ချီဖွေနှင့်ဆော့လော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ(၁၇)ရွာမှ ငေါ့်ချမ်း၊ လာချိတ်၊ လော်ဝေါ်နှင့် လီဆူဌာနေတိုင်းရင်းသား စုစုပေါင်း ၄၅၀ဝ ကျော်၏ ဘဝနေထိုင်မှုများကို အကျိုးပြု ထောက်ပံ့ထားသည်။ အထက်ပါ ကျေးရွာလူ့အဖွဲ့အစည်းများ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၁၀ဝ၀ ကျော်အတည်းကရေရှည်တည်တံ့စွာ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး မြစ်ဝှမ်းလွင်ပြင်တစ်လျှောက် မတ်စောက်လှသောတောင်တန်းများကြားရှိ လွင်ပြင်ထဲတွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူကာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ကြသည်။
KDNG မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည် | website: http://burmese.kdng.org
Download: Burmese | English
ဤတိမ်းစောင်းမခံနိုင်သော အစီရင်ခံစာသည် မြန်မာနိုင်ငံမွန်ပြည်နယ်အတွင်း သံလွင်မြစ်ဝရှိမြို့နယ်(၆) မြို့နယ်၏ဘဝရုပ်ပုံလွှာနှင့်မြစ်ညာပိုင်းတွင်တည်ဆောက် မည့် ရေကာတာစီမံကိန်းကြီးများ၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို မည်သို့ခံနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။ သံလွင်မြစ်အထက်ပိုင်းတွင် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း တည် ဆောက်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် မြစ်ေအာက်ပိုင်းနေမွန်လူမှုအသိုက်အဝန်းများ အတွက်များစွာသောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေပါလမ့်မည်။သို့ဖြစ်ရာစီမံကိန်းများ အကြောင်းကိုသောလ်ည်းကောင်း၊ ထိုစီမံကိန်းကြောင့်ရိုက်ခတ်လာဖွယ်ရှိသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ လူမှုအသိုက်အဝန်း များထံသို့ အသိပေးထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
To Download: မြန်မာဘာသာ
လက်တလော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သ ဘောတူညီချက် များ နှင့် တွေ့ဆုံနေကြသော် လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နာဝါရီလအတွင်းမှစပြီး တအာင်းလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ပဋိပက္ခပိုမိုများနှင့် စစ်တပ်၏ စိုးမိုးချယ်လှယ်မှု များ တစ်ဆ ထက်တစ်ဆ ပိုမိုးများပြားလာသည်ကိုသာ ကြုံတွေ့နေရသည့် "ပဋိပက္ခလောင်စာများ"အမည်ရှိ စာတမ်းကို တအာင်းကျောင်း သားနှင့် လူငယ် များ အစည်းအရုံး မှ မေလ ၂၃ရက်နေ့တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပဋိပက္ခလောင်စာများ စာတမ်း ဒေါင်းလုပ်ရန်။ အင်္ဂလိပ် | မြန်မာ
ကချင် “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” မှ ကြုံတွေ့ရသော သင်ခန်းစာများ
မေလ ၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် ထုတ်ဝေသည်။
အစီရင်ခံစာ ရယူရန်။ ။ မြန်မာ ၊ English ၊ Kachin
Burma's military government, together with the government of India, is planning to buildagiant hydroelectric dam on the Chindwin River,amajor tributary of the Irrawaddy, in Burma’s northwest Sagaing Division. 80% of the electricity produced will be exported to India. If construction of Tamanthi Dam goes ahead the flood reservoir will be almost 1,400 sq km, the size of Delhi, and will permanently displace over 45,000 people. 2,400 villagers have already been forcibly moved toarelocation site.
English | Burmese | Kuki
To Download: အင်္ဂလိပ် | မြန်မာ
ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များအပေါ်လေ့လာမှု
ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များအပေါ်လေ့လာမှု: မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက်အဖွဲ့၏ သုံးသပ်လေ့လာချက်
To Download: မြန်မာ
တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်ပိုရေးရှင်း၏ မြစ်ဆုံဆည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားချက်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက်အဖွဲ့၏ တုံ့ပြန်မှု
အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် တရုတ်မီဒီယာမှ တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း၏ အကြီးအကဲ ဥက္ကဌ လူကွဇ်ဇောင် (Lu Qizhou) ကို မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များမှာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းမှ အဓိက အချက်များအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက်အဖွဲ့ (BRN) ၏ တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်များဖြစ်ပါ သည်။
ဒေါင်းလုပ်ရန်။ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ကယန်း၊ တရုတ်
ကရင်နီလူမျိုးများအပေါ် ဆည်ဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းပါ
နအဖစစ်တပ်၏ဆယ်စုနှစ်များစွာ အတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခိုင်းမှုနှင့် မတရားပြုမူမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်လာ ပြီးနောက် ကရင်နီလူမျိုးများသည် ၄င်းတို့ပြည်နယ်ထဲတွင် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သောအကျိုးဆက်များ နှင့် လူဦးရေ ၁၀၀၀ခန့်သာ ကျန်ရှိနေတော့သည့် ယင်းတလဲလူမျိုးတွေကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနှင့် လက်နက် ကိုင် ပိဋ္ဋိပ က္ခတွေကို နောက်ထပ်လောင်စာဆီဖြည့်နေသည့် ရေကာတာသုံးခုကို လက်ရှိ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
အစီရင်ခံရယူရန်: အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ တရုတ်
ခိုးကေ - ဇီဝမျိုးကွဲများ ပျောက်ဆုံးတော့မည့် အကျပ်အတည်း (Khoe Kay: Biodiversity in Peril)
ဤသည်မှာ ကရင်ပြည်နယ်၊ သံလွင်မြစ်တွင် ပထမဦးဆုံးဆောင်ရွက်သည့် ဇီဝမျိုးကွဲများဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု တခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ကြိုးပမ်းမှတ်တမ်းပြုချက်အရ အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၉၄ ခုနှင့် တိရိစ္ဆာန်အမျိုးပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့အနက်တွင် ရှားပါးမျိုးတုန်းတော့မည့် တိရိစ္ဆာန်အမျိုးပေါင်း ၄၂ မျိုးလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ၀ဲကြီးဆည် တည်ဆောက်မည့် မြစ်ကွေ့အနီး ခိုးကေဒေသတွင် ၃-လ အတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စစ်တမ်းကောက်ယူ လေ့လာမှုများကို အခြေခံ၍ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံတိကျသည့် ဇယားချပ်များ၊ ဓါတ်ပုံများပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည်။
ကယန်းမြေ၏ နတ်စိမ်းတစ္ဆေတို့ကို ရေနှစ်မြုပ်စေခြင်း
ပေါင်းလောင်းမြစ် အထက်ပိုင်းဆည်၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ
Drowning the Green Ghost of Kayanland: Impacts of the Upper Paunglaung Dam in Burma
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပေါင်းလောင်းမြစ် အထက်ပိုင်းဆည်ကြောင့် ကယန်းပြည်သူလူထုများအပေါ် လက်ငင်းဖြစ်ပေါ်စေ သည့် ဆိုးကျိုးများနှင့် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ဆိုးကျိုးများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အဓမ္မပြောင်းရွှေ့နေရာချ ထားခြင်း၊ မြန်မာစစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ပိုမိုတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ ပျက်စီးရခြင်း စသည်တို့ အပါအ၀င် ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆည်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးရန် လျာထားပြီး စစ်အစိုးရ၏ လူသူမနီးသည့် မြို့တော်သစ် "နေပြည်တော်"အတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည်။
အစီရင်ခံစာရယူရန်။ မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ
Adobe Acrobat7နှင့် အထက် ပရိုဂရမ်ဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့သူ အသစ်များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (The New Fiananciers and the Environment)
ဧရာဝတီမြစ်ကို ပိတ်ဆို့ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်း